तेस्रो कलेजो प्रत्यारोपणले सफलता पायो
scheduleशनिवार कार्तिक १५ गते, २०७७
काठमाडौं, २ कात्तिक । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा गरिएको कलेजो प्रत्यारोपण कार्यले सफलता प्राप्त गरेको छ । शुक्रबार रुपन्देहीका ५२ वर्षीय पुरुष बिरामीलाई उनका २७ वर्षीय छोराले प्रदान गरेको कलेजोले प्रत्यारोपण सफलता प्राप्त गरेको हो ।
प्रत्यारोपित बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था ठीक रहेको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका प्रत्यारोपण चिकित्सक प्राडा रमेशसिंह भण्डारीको टोलीले करीब आठ घण्टा लगाएर सो प्रत्यारोपण गरेको थियो ।
प्रा.डा. भण्डारीका अनुसार अस्पतालमा यो प्रत्यारोपण तेस्रो पटक सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको हो । गत जेठ १८ गते पहिलो र साउन ३ गते दोस्रो कलेजो प्रत्यारोपण भएको थियो ।
पहिलो प्रत्यारोपणमा ३३ वर्षीया छोरीले ५८ वर्षीय आफ्ना पितालाई कलेजो दिएकी थिइन् । ‘हामी अस्पतालमा कलेजो प्रत्यारोपणलाई नियमित बनाउने तयारीमा छौँ, महिनामा कम्तिमा एउटा कलेजो प्रत्यारोपणको लक्ष्य लिएका छौँ’, उनले भने ।
विदेशको तुलनामा नेपालमा कलेजो प्रत्यारोपण कार्य सस्तो छ । प्राडा भण्डारीका अनुसार करीब २५ लाखमा कलेजो प्रत्यारोपण गर्न सकिने छ । आफ्ना परिवारभित्रका सदस्यले मात्र कलेजो दान गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ ।
दाङका कोरोना संक्रमितको बाँकेमा मृत्यु
पोखरामा शुक्रबार अहिलेसम्मकै सर्वाधिक संक्रमित थपिए
काठमाडौं उपत्यकामा थपिए १८८८ कोरोना संक्रमित
शुक्रबार ३५१७ नयाँ संक्रमित थपिँदा ४०९६ जना निको, १६ जनाको मृत्यु
जाडोयाममा यसरी स्वास्थ्यको ख्याल राखौं
फिचर पोस्ट, स्वास्थ्य
जाडो बढ्न थाल्यो, जाडोमा कोराना घट्ला कि बढ्ला ?
विहीबार थपिएका कोरोना संक्रमित कुन जिल्लाका कति ?
काठमाडौं उपत्यकामा विहीबार थपिए १६१५ कोरोना संक्रमित
विहीबार थपिए २३६४ कोरोना संक्रमित, २४ घण्टामा १७ जनाको मृत्यु
काठमाडौं उपत्यकामा थपिए ८४३ कोरोना संक्रमित
आमा बन्ने सही उमेर कति ? ३० कटेपछि जन्माउँदै हुनुहुन्छ भने यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्
साढे दुई हजार जनाको परीक्षण गर्दा ५७० जनामा कोरोना संक्रमण
१६ जिल्लामा ५ सयभन्दा बढी कोरोना संक्रमित, कुन जिल्लामा कति ?
उपत्यकामा सोमबार थपिए ८९५ कोरोना संक्रमित
सोमबार थपिए १७४१ कोरोना संक्रमित, ४००५ जना निको हुँदा १५ जनाको मृत्यु
मध्यरात यसरी मनाइन्छ खामे जात्रा अर्थात् राँगो जात्रा
आइतबार थपिएका कोरोना संक्रमित कुन जिल्लाका कति ? हेर्नुहोस् जिल्लागत विवरण
प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्‍वास प्रस्तावको तयारी भन्‍ने खबर कसले बालुवाटार पुर्‍यायो ?
काठमाडौं, १५ कात्तिक । सत्तारुढ दल नेकपाका दुई अध्यक्षबीच भेटघाट र बोलचाल नभएको झण्डै दुई साता भयो । यसबीचमा प्रधानमन्त्री...
फाइल फोटो काठमाडौं, १५ कात्तिक । सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल...
आइपिएलमा राजस्थानले पञ्‍जाबलाई हरायो, प्लेअफ दौड थप रोचक बन्दै
काठमाडौं, १५ कात्तिक । यूएईमा जारी इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) क्रिकेटअन्तर्गत गएराति सम्पन्‍न खेलमा राजस्थान रोयल्सले...
‘कोरोनाको लक्षण देखियो, तत्काल पिसिआर परीक्षण गराउनुहोस्’
काठमाडौं, १५ कात्तिक । सरकार तीव्र बनिरहेको कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको रणनीति तय गर्न अलमलिएको छ । पछिल्लो समय...
कस्मिरमा भाजपाका तीन कार्यकर्ताको हत्या, मोदीद्वारा भर्त्सना
काठमाडाैं, १४ कात्तिक । कस्मिरमा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका तीन कार्यकर्ताको हत्या भएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले...
अमेरिकामा कोरोना सङ्क्रमणको दरमा फेरि वृद्धि, एकैदिन ९० हजार नयाँ सङ्क्रमित थपिए
काठमाडाैं, १५ कात्तिक । अमेरिकामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुनः तीव्र गतिमा बढ्न थालेको छ । अमेरिकाको सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल...
क्रिस गेल शतकबाट एक रनले चुके, पञ्‍जाबद्वारा राजस्थानसामू १८६ रनको लक्ष्य
काठमाडौं, १४ असोज । यूएईमा जारी इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) क्रिकेटअन्तर्गत शुक्रबार बेलुका किङ्गस इलाभेन पञ्‍जाब र राजस्थान...
टर्कीमा शक्तिशाली भूकम्प जाँदा कम्तीमा २२ जनाको मृत्यु
एजेन्सी, १५ कात्तिक । टर्कीमा शक्तिशाली भूकम्प जाँदा कम्तीमा २२ जनाको मृत्यु भएको छ । ग्रीक टापु सामोसभन्दा उत्तरमा रहेको...